720p – Quality – Alpha Premium
Way Back Home (2021) ##unicode Way back home(2021)ဒီဇာတ်ကားလေးက မိသားစုဒရမ်မာဇာတ်ကားကောင်းလေးမို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Cast တွေကတော့ Han Woo Yeon,Jeon Seok Ho တို့အပြင် အခြားသရုပ်ဆောင်တွေလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဆန်းဝန်နဲ့ဂျောင်ဝန်တို့က အရမ်းချစ်ကြတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ပါ ဂျောင်ဝန်က ကလေးတွေကို ရေကူးသင်ပေးတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ပါ ဆန်းဝန်က ပရိဘောဂလုပ်တဲ့သူပေါ့။ တစ်နေ့မှာတော့ ဂျောင်ဝန်ဆီကရဲစခန်းက ဖုန်းဆက်လာပါတယ် လွန်ခဲတဲ့၁၀နှစ်ကတရားခံကိုမိပြီလို့ ဒါပေမယ့်သူကအဲ့အကြောင်းတွေကို သူ့ခင်ပွန်းကိုမပြောပြထားပါဘူး တစ်နေ့သူ့ခင်ပွန်းသိသွားတဲ့အခါမှာတော့ အေးချမ်းတဲ့လင်မယားဘဝထဲ အက်ကြောင်းဖြစ်လာပါတော့တယ် ဘာအကြောင်းဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ ဇာတ်လမ်းတထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ကြရအောင် မိသားစုဒရမ်မာမို့နွေးထွေးမှုရစေမှာမို့ ကြည့်ဖို့ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ် ##zawgyi Way back home(2021)ဒီဇာတ္ကားေလးက မိသားစုဒရမ္မာဇာတ္ကားေကာင္းေလးမို႔ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ Cast ေတြကေတာ့ Han Woo Yeon,Jeon Seok Ho တို႔အျပင္ အျခားသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြလည္း ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ဆန္းဝန္နဲ႔ေဂ်ာင္ဝန္တို႔က အရမ္းခ်စ္ၾကတဲ့လင္မယားႏွစ္ေယာက္ပါ ေဂ်ာင္ဝန္က ကေလးေတြကို ေရကူးသင္ေပးတဲ့ဆရာမတစ္ေယာက္ပါ ဆန္းဝန္က ပရိေဘာဂလုပ္တဲ့သူေပါ့။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ေဂ်ာင္ဝန္ဆီကရဲစခန္းက ဖုန္းဆက္လာပါတယ္ လြန္ခဲတဲ့၁၀ႏွစ္ကတရားခံကိုမိၿပီလို႔ ဒါေပမယ့္သူကအဲ့အေၾကာင္းေတြကို သူ႔ခင္ပြန္းကိုမေျပာျပထားပါဘူး တစ္ေန႔သူ႔ခင္ပြန္းသိသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ ေအးခ်မ္းတဲ့လင္မယားဘဝထဲ အက္ေၾကာင္းျဖစ္လာပါေတာ့တယ္ ဘာအေႀကာင္းျဖစ္မလဲဆိုတာကေတာ့ ဇာတ္လမ္းတထဲမွာ ဆက္လက္ႀကည့္ႀကရေအာင္ မိသားစုဒရမ္မာမို႔ေႏြးေထြးမႈရေစမွာမို႔ ၾကည့္ဖို႔ၫႊန္းေပးလိုက္ပါတယ္ Review – Myint Thuzar ...
IMDB: 6.5/10 21478 votes
The Woman in the Window (2021) ##unicode ဒီတစ်ခါ Netflixက အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ psychological thriller အမျိုးအစား ဇာတ်ကားကောင်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် အန်နာဆိုတဲ့ ကလေးစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်ဟာ အပြင်ထွက်ရမှာကိုကြောက်တဲ့စိတ်ရောဂါကို ခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ် သူက အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲ အမြဲစပ်စုနေတတ်ပါတယ် တစ်နေ့ သူ့အိမ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကို ရက်ဆဲစ်မိသားစု အိမ်ပြောင်းလာတော့ အဲ့ဒီမိသားစုက သားဖြစ်တဲ့ အီသန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ အန်နာ ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ် သူ့အဖေက သားကိုနှိပ်စက်တတ်တာကို သူ ရိပ်မိခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီနောက် တစ်နေ့ ကောင်လေးအမေ ဂျိန်းရက်ဆဲစ်လည်း အိမ်လာလည်ပြီး သူတို့ရင်းနှီးခဲ့ကြပါတယ် တစ်ညမှာတော့ ရက်ဆဲစ်တို့အိမ်ကနေ အော်သံတစ်ခုကို အန်နာကြားခဲ့ပြီး ဂျိန်းအသတ်ခံရတာကို မြင်ခဲ့ရပါတယ် မစ္စတာရက်ဆဲစ်က တရားခံပါလို့ ရဲတိုင်တော့ ဘယ်သူမှ အန်နာ့စကားကိုမယုံကြပါဘူး ပြီးတော့ ဂျိန်းရက်ဆဲစ်ဆိုတဲ့ အန်နာ မမြင်ဖူးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် သူကမှ ဂျိန်းရက်ဆဲစ်အစစ်ပါတဲ့ အားလုံးက အန်နာကို အိမ်တွင်းပုန်း စိတ်ဝေဒနာရှင်လို့ပဲ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ် အန်နာက တကယ်ပဲထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခဲ့တာလား ဂျိန်းရက်ဆဲစ်ကရော ဘာလို့နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတာလဲ ဘယ်သူလဲအစစ်လဲ သူ့ကိုပဲအားလုံးကပေါင်းလိမ်နေတာလားဆိုတာကို လှည့်ကွက်အပြည့်နဲ့ကြည့်ရမယ့် mystery ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် ##zawgyi ဒီတစ္ခါ Netflixက အသစ္ထြက္ရွိထားတဲ့ psychological thriller အမ်ိဳးအစား ဇာတ္ကားေကာင္းကို ...
The Paper Tigers (2021) ##unicode Danny,Hing,Jimတို့သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ဟာ လူငယ်ဘဝကကွန်ဖူးသင်တန်းသားတွေဖြစ်ပြီးတော့ ကျားသုံးကောင်အဖြစ်နာမည်ကြီးကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တိုက်ခိုက်လိုက်တိုင်း အရှုံးဆိုတာမရှိအောင် နာမည်ကြီးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ဟာ ၂၅နှစ်ကြာပြီးနောက်မှာ လူအိုကြီးတွေဖြစ်လာကြပါတော့တယ်။ Dannyဟာ ကွန်ဖူးကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီးတော့ သားလေးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေကာတိုက်ခိုက်တာတွေကိုစိတ်မဝင်စားတော့တဲ့သူပေါ့။ တစ်နေ့မှာတော့ သူ့ဆီကိုငယ်သူငယ်ချင်း Hingရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့ဆရာဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလာပြောပြခဲ့တယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ နှလုံးရောဂါကြောင့် ပုံမှန်အတိုင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထင်မိပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ငယ်ဘဝပြိုင်ဖက်Carterဟာ သူတို့ဆရာသေဆုံးမှုက မရိုးရှင်းကြောင်းပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Danny ,Hing ,Jimတို့သုံးယောက် သူတို့ဆရာသေဆုံးမှုအတွက် လက်စားချေဖို့အတွက် တာဝန်ရှိလာခဲ့တယ်။ အရင်လိုဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ်သန်သန်စွမ်းစွမ်းတွေ မဟုတ်တော့တဲ့ လူအိုကြီးသုံးယောက်ဟာ သူတို့ဆရာအတွက် ဘယ်လိုလက်စားချေပေးမလဲဆိုတာ ရယ်ရယ်မောမောကြည့်ရှုရမယ့်အက်ရှင်ဟာသ ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi Danny,Hing,Jimတို႔သူငယ္ခ်င္းသုံးေယာက္ဟာ လူငယ္ဘ၀ကကြန္ဖူးသင္တန္းသားေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ က်ားသုံးေကာင္အျဖစ္နာမည္ႀကီးၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔တိုက္ခိုက္လိုက္တိုင္း အရႈံးဆိုတာမရွိေအာင္ နာမည္ႀကီးၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းသုံးေယာက္ဟာ ၂၅ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္မွာ လူအိုႀကီးေတြျဖစ္လာၾကပါေတာ့တယ္။ Dannyဟာ ကြန္ဖူးကိုစြန႔္လႊတ္လိုက္ၿပီးေတာ့ သားေလးကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနကာတိုက္ခိုက္တာေတြကိုစိတ္မ၀င္စားေတာ့တဲ့သူေပါ့။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူ႔ဆီကိုငယ္သူငယ္ခ်င္း Hingေရာက္လာခဲ့ၿပီးသူတို႔ဆရာဆုံးသြားၿပီဆိုတဲ့အေၾကာင္းလာေျပာျပခဲ့တယ္။ အစပိုင္းမွာေတာ့ ႏွလုံးေရာဂါေၾကာင့္ ပုံမွန္အတိုင္းေသဆုံးခဲ့တယ္လို႔ထင္မိေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ငယ္ဘ၀ၿပိဳင္ဖက္Carterဟာ သူတို႔ဆရာေသဆုံးမႈက မ႐ိုးရွင္းေၾကာင္းေျပာျပလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ Danny ,Hing ,Jimတို႔သုံးေယာက္ သူတို႔ဆရာေသဆုံးမႈအတြက္ လက္စားေခ်ဖို႔အတြက္ တာ၀န္ရွိလာခဲ့တယ္။ အရင္လိုျဖတ္ျဖတ္လတ္လတ္သန္သန္စြမ္းစြမ္းေတြ မဟုတ္ေတာ့တဲ့ လူအိုႀကီးသုံးေယာက္ဟာ သူတို႔ဆရာအတြက္ ဘယ္လိုလက္စားေခ်ေပးမလဲဆိုတာ ရယ္ရယ္ေမာေမာႀကည့္ရႈရမယ့္အက္ရွင္ဟာသ ကားေကာင္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ Review – Myet Chel File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : ...
Ride or Die (2021) ##unicode ဒီတစ်ခေါက် lesbian ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေတဲ့ဆူမီနာဝါဆိုတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ရေးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကချစ်မိခဲ့ပါတယ် အထက်တန်းကျောင်းမှာကတည်းက သူတို့နှစ်ယောက်စတွေ့ခဲ့ကြတာပါ ရေးကတော့ ဆူမီနာဝါကို တဖတ်သတ်အရင်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီနောက် ရေးနဲ့ဆူမီနာဝါတို့ အဆက်အသွယ်ပြတ်ခဲ့ကြပါတယ် ဆူမီနာဝါကဆင်းရဲပါတယ် ဒါကြောင့်ချမ်းသာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပေမယ့် အနှိပ်စက်ခံခဲ့ရပါတယ် တစ်နေ့ ရေးကို ဆူမီနာဝါက ဆက်သွယ်ခဲ့လို့ သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ် သူ့ယောက်ျားကိုသတ်ပေးနိုင်မလားလို့ ရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အခါမှာ ရေးက တကယ်သတ်လိုက်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေရူပ်ထွေးလာပါတော့တယ် ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ အားပေးကြည့်ရူကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္ lesbian ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပတဲ့ဆူမီနာဝါဆိုတဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ေရးဆိုတဲ့ေကာင္မေလးကခ်စ္မိခဲ့ပါတယ္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာကတည္းက သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စေတြ႕ခဲ့ၾကတာပါ ေရးကေတာ့ ဆူမီနာဝါကို တဖတ္သတ္အရင္ႀကိဳက္ခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီေနာက္ ေရးနဲ႔ဆူမီနာဝါတို႔ အဆက္အသြယ္ျပတ္ခဲ့ၾကပါတယ္ ဆူမီနာဝါကဆင္းရဲပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ခ်မ္းသာတဲ့ေယာက္်ားတစ္ေယာက္နဲ႔အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ေပမယ့္ အႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရပါတယ္ တစ္ေန႔ ေရးကို ဆူမီနာဝါက ဆက္သြယ္ခဲ့လို႔ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ျပန္ေတြ႕ခဲ့ၾကပါတယ္ သူ႔ေယာက္်ားကိုသတ္ေပးႏိုင္မလားလို႔ ေရးကိုေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့အခါမွာ ေရးက တကယ္သတ္လိုက္ပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔ ဇာတ္လမ္းေတြ႐ူပ္ေထြးလာပါေတာ့တယ္ ဇာတ္လမ္းဇာတ္အိမ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ဇာတ္ကားျဖစ္လို႔ ဘာေတြဆက္ျဖစ္မလဲဆိုတာ အားေပးၾကည့္႐ူၾကပါဦးေနာ္ Review – Hmue File Size – 1GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL Genre : Drama, Romance, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (softsub) Translated by ...
Night of the Sicario (2021) ##unicode Night of the sicario ဇာတ်ကားမှာတော့ Taylorဟာ သူ့အဖေဆီကအမွေရထားတဲ့လူမှုကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအိမ်ကို ဦးဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြောင့် သူတို့စောင့်ရှောက်ရေးအိမ်ယာက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ဘေးလွှတ်ရာကိုရွှေ့ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ အဆင်မပြေတာကြောင့် အိမ်ထဲမှာဘဲ လုံခြုံအောင်ထားဖို့စီစဉ်နေတုန်းမှာ အေးဂျင့်တစ်ယောက်က ရောက်လာပြီးတော့ ဒဏ်ရာရနေတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ သူ့သမီးလေးကို ခဏစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်။ အကြောင်းအရင်းကိုသေချာမသိဘဲ အဲ့သားအဖကို အိမ်မှာခေါ်ထားလိုက်တဲ့ Taylorတစ်ယောက်ဟာ နောက်တော့မှ အဲ့လူတွေနောက်ကို မူးယစ်ဆေးဂိုဏ်းက လူဆိုးတွေလိုက်လာနေတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ သေနတ်နဲ့လူဆိုးတွေက Taylorတို့စောင့်ရှောက်ရေးအိမ်ယာထဲကို ဝင်လာကာ Taylorနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုအဖိုးအဖွားတွေ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ပြုလုပ်ကာ အဲ့သားအဖကို ထုတ်ပေးဖို့ ပြောခဲ့တယ်။Taylorတစ်ယောက် ဒီဒဏ်ရာရနေတဲ့ သားအဖနဲ့ စောင့်ရှောက်ရေးအိမ်ယာက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Night of the sicario ဇာတ္ကားမွာေတာ့ Taylorဟာ သူ႔အေဖဆီကအေမြရထားတဲဲ့လူမႈကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအိမ္ကို ဦးေဆာင္ေနသူျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ သူတို႔ေစာင့္ေရွာက္ေရးအိမ္ယာက သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေတြကို ေဘးလႊတ္ရာကိုေ႐ႊ႕ေပးဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ေပမဲ့ အဆင္မေျပတာေၾကာင့္ အိမ္ထဲမွာဘဲ လုံၿခဳံေအာင္ထားဖို႔စီစဥ္ေနတုန္းမွာ ေအးဂ်င့္တစ္ေယာက္က ေရာက္လာၿပီးေတာ့ ဒဏ္ရာရေနတဲ့အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္နဲ႔ သူ႔သမီးေလးကို ခဏေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ အကူအညီေတာင္းခဲ့တယ္။ အေၾကာင္းအရင္းကိုေသခ်ာမသိဘဲ အဲ့သားအဖကို အိမ္မွာေခၚထားလိုက္တဲ့ Taylorတစ္ေယာက္ဟာ ေနာက္ေတာ့မွ အဲ့လူေတြေနာက္ကို မူးယစ္ေဆးဂိုဏ္းက လူဆိုးေတြလိုက္လာေနတာကိုသိလိုက္ရတယ္။ ေသနတ္နဲ႔လူဆိုးေတြက Taylorတို႔ေစာင့္ေရွာက္ေရးအိမ္ယာထဲကို ဝင္လာကာ ...
IMDB: 3.4/10 137 votes
Jakob’s Wife (2021) ##unicode Horror အကြိုက်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ကားသစ်လေးတစ်ကားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အန်းက မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့က ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး ဂျေကော့ဘ်နဲ့ လက်ထပ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်။ သူ့အိမ်ထောင်သက် အနှစ် ၃၀ လုံး အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပြီး သူ့ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒဆိုတာတွေကိုတောင် မေ့သွားတဲ့သူပေါ့။ တစ်နေ့တော့ မြို့လေးကိုပြန်လာတဲ့ သူ့ငယ်ဘဝကရည်းစားဟောင်းနဲ့ သွားတွေ့ပြီးပြန်ရောက်လာကတည်းက သူ့ပုံစံတွေဟာမူမမှန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုယ်ထဲကသူမဟုတ်တဲ့သူက ထိန်းချုပ်နေသလိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ကနေလည်း ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားတွေကို ခံစားနေရပြီးလက်မလွှတ်ချင်ဖြစ်ပြီး အန်းဟာစိတ်ဒွိဟဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ ဂျေကော့ဘ်က သတိထားမိလာပြီး နောက်ဆုံးသူ့မိန်းမအထဲမှာဝင်ပူးနေတဲ့ အရာကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာရပါတော့တယ်။ သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက် ဒီအရာကြီးကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ရင်တထိတ်ထိတ်၊ အသဲတယားယားနဲ့ကြည့်ရမှာပါ။ (နှလုံးမကောင်းသူများနှင့် ကလေးသူငယ်များကြည့်ရန် မသင့်လျော်သောဇာတ်ဝင်ခန်းများပါဝင်သည်။) ##zawgyi Horror အႀကိဳက္ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ ကားသစ္ေလးတစ္ကားတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အန္းက ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ၿမိဳ႕က ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂ်ေကာ့ဘ္နဲ႔ လက္ထပ္ထားတဲ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္။ သူ႔အိမ္ေထာင္သက္ အႏွစ္ ၃၀ လုံး အိမ္ေထာင္ရွင္မေကာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၿပီး သူ႔ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵဆိုတာေတြကိုေတာင္ ေမ့သြားတဲ့သူေပါ့။ တစ္ေန႔ေတာ့ ၿမိဳ႕ေလးကိုျပန္လာတဲ့ သူ႔ငယ္ဘဝကရည္းစားေဟာင္းနဲ႔ သြားေတြ႕ၿပီးျပန္ေရာက္လာကတည္းက သူ႔ပုံစံေတြဟာမူမမွန္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ကိုယ္ထဲကသူမဟုတ္တဲ့သူက ထိန္းခ်ဳပ္ေနသလိုပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ကေနလည္း ႀကီးမားတဲ့စြမ္းအားေတြကို ခံစားေနရၿပီးလက္မလႊတ္ခ်င္ျဖစ္ၿပီး အန္းဟာစိတ္ဒြိဟျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ အဲ့လိုနဲ႔ ေဂ်ေကာ့ဘ္က သတိထားမိလာၿပီး ေနာက္ဆုံးသူ႔မိန္းမအထဲမွာဝင္ပူးေနတဲ့ အရာကိုတိုက္ထုတ္ဖို႔အတြက္ျဖစ္လာရပါေတာ့တယ္။ သူတို႔လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ဒီအရာႀကီးကိုတိုက္ထုတ္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကိုေတာ့ ရင္တထိတ္ထိတ္၊ ...
Hello Charlie (2021) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Hello Charlie ဆိုတဲ့အိန္ဒိယဟာသကားလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ကတော့ ချာလီဟာ သေသွားတဲ့သူ့အဖေရဲ့ အကြွေးတွေကိုဆပ်နိုင်ဖို့အတွက်မွန်ဘိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ရောက်လာပါတယ်ချာလီရဲ့အားနည်းချက်က အရာရာကိုအမြဲတမ်းအလွဲလွဲအချော်ချော်လုပ်တတ်ပြီး ပြဿနာအမြဲတမ်းတက်လေ့ရှိတာပါ အဲ့တာကြောင့်အလုပ်တိုင်းပြုတ်ပြီး သူ့ဦးလေးအိမ်မှာပဲ သောင်တင်နေပါတော့တယ် တစ်ဖက်မှာတော့ မက်ကွာနာဆိုတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဟာဘဏ်တွေကနေ ချေးငွေတွေယူပြီး နိုင်ငံထဲကထွက်ပြေးနေပါတယ် သူ့ရဲ့အကြံကမျောက်ဝံဝတ်စုံကြီးဝတ်ပြီး စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဖြတ် ဒူဘိုင်းကိုသွားဖို့ပါ အဲ့ဒီမှာမထင်မှတ်ဘဲ ချာလီရဲ့ကားကိုငှားမိပါတော့တယ်အမြဲတမ်းတလွဲလုပ်တဲ့ချာလီတစ်ယောက် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကံကောင်းစွာနဲ့ရာဇဝတ်သားကိုဖမ်းမိနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦး အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ အရမ်းလည်းရယ်ရတဲ့ ကားလေးဖြစ်လို့ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ Hello Charlie ဆိုတဲ့အိႏၵိယဟာသကားေလးတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း ကေတာ့ ခ်ာလီဟာ ေသသြားတဲ့သူ႔အေဖရဲ႕ အေႂကြးေတြကိုဆပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္မြန္ဘိုင္းမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ေရာက္လာပါတယ္ခ်ာလီရဲ႕အားနည္းခ်က္က အရာရာကိုအၿမဲတမ္းအလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္လုပ္တတ္ၿပီး ျပႆနာအၿမဲတမ္းတက္ေလ့ရွိတာပါ အဲ့တာေၾကာင့္အလုပ္တိုင္းျပဳတ္ၿပီး သူ႔ဦးေလးအိမ္မွာပဲ ေသာင္တင္ေနပါေတာ့တယ္ တစ္ဖက္မွာေတာ့ မက္ကြာနာဆိုတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဟာဘဏ္ေတြက​ေန ေခ်းေငြေတြယူၿပီး ႏိုင္ငံထဲကထြက္ေျပးေနပါတယ္ သူ႔ရဲ႕အႀကံကေမ်ာက္ဝံဝတ္စုံႀကီးဝတ္ၿပီး စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကိုျဖတ္ ဒူဘိုင္းကိုသြားဖို႔ပါ အဲ့ဒီမွာမထင္မွတ္ဘဲ ခ်ာလီရဲ႕ကားကိုငွားမိပါေတာ့တယ္အၿမဲတမ္းတလြဲလုပ္တဲ့ခ်ာလီတစ္ေယာက္ ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ကံေကာင္းစြာနဲ႔ရာဇဝတ္သားကိုဖမ္းမိႏိုင္မလားဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦး အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ အရမ္းလည္းရယ္ရတဲ့ ကားေလးျဖစ္လို႔ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB Format…mp4 Quality : 720p HDrip Duration…1h 42min Genre :Action,Comedy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
Namo OK (2014) ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ ထိုင်းဟာသကားကောင်းတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းလေးက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကြည့်လို့ကောင်းမယ့်ဇာတ်လမ်းမျိုးလေးပါ စတိဗ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံခြားသားဘုန်းကြီးတစ်ပါးက လမ်းမှာမိုးကြိုးပစ်ခံရပြီး အတိတ်မေ့သွားပါတယ် ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့စတိဗ်ကို ဘုန်းကြီးတွေကစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် သူတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ် စတိဗ်က ဘုန်းကြီးအစစ်လားအတုလားဆိုလားလည်းဘယ်သူမှမသိပါဘူး ဘုန်းကြီးလိုလည်းမနေတတ်တဲ့စတိဗ်တစ်ယောက် ရယ်စရာ အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေလုပ်မိပါတော့တယ် ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ တန်ဆိုတဲ့သူဌေးကြီးကလည်း သူကလူမုန်းများလို့သတ်မယ့်လူတွေရှိတယ်ဆိုပြီး သေရမှာကြောက်ပြီးစိတ္တဇတွေဖြစ်နေတာပါ သူကလည်းဘယ်လိုအလွဲတွေလုပ်မလဲဆိုတာကြည့်ရူရမှာပါ တကယ်ရယ်ရမယ့်ဇာတိကားကောင်းလေးဖြစ်လို့ ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ ထိုင္းဟာသကားေကာင္းတစ္ကားပဲျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းေလးက ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းေလးနဲ႔ေပါ့ေပါ့ပါးပါးၾကည့္လို႔ေကာင္းမယ့္ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးေလးပါ စတိဗ္ဆိုတဲ့ႏိုင္ငံျခားသားဘုန္းႀကီးတစ္ပါးက လမ္းမွာမိုးႀကိဳးပစ္ခံရၿပီး အတိတ္ေမ့သြားပါတယ္ ေဆး႐ုံေရာက္သြားတဲ့စတိဗ္ကို ဘုန္းႀကီးေတြကေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ သူတို႔ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကိုေခၚလာခဲ့ပါတယ္ စတိဗ္က ဘုန္းႀကီးအစစ္လားအတုလားဆိုလားလည္းဘယ္သူမွမသိပါဘူး ဘုန္းႀကီးလိုလည္းမေနတတ္တဲ့စတိဗ္တစ္ေယာက္ ရယ္စရာ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ေတြလုပ္မိပါေတာ့တယ္ ဒီဇာတ္လမ္းထဲမွာ တန္ဆိုတဲ့သူေဌးႀကီးကလည္း သူကလူမုန္းမ်ားလို႔သတ္မယ့္လူေတြရွိတယ္ဆိုၿပီး ေသရမွာေၾကာက္ၿပီးစိတၱဇေတြျဖစ္ေနတာပါ သူကလည္းဘယ္လိုအလြဲေတြလုပ္မလဲဆိုတာၾကည့္႐ူရမွာပါ တကယ္ရယ္ရမယ့္ဇာတိကားေကာင္းေလးျဖစ္လို႔ ၫႊန္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္ review – Hmue File Size – 1GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL Genre : Comedy Subtitle : Myanmar Subtitle (hardsub) Translated by Hmue Encoded by Arrow
Snake Fall ofaCity (2020) ##unicode လူသူဝေးတဲ့သဲကန္တာရတစ်ခုထဲမှာ စူးစမ်းရှာဖွေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ရှားပါးသတ္တုလိုက်ရှာရင်း စက်ရုံဟောင်းကြီးတစ်ခုကို ရောက်လာကြပါတယ်။ အဲ့စက်ရုံဟောင်းကြီးမှာပဲ သူတို့လိုက်ရှာနေတဲ့ ရှားပါးသတ္တုကို ရှာတွေ့သွားကြပါတယ်။ သူတို့လည်း သူဌေးဆီကို တည်နေရာသတင်းပို့ပြီး စက်ရုံထဲလျှောက်ကြည့်နေတုန်း ထူးဆန်းတဲ့ဧရာမမြွေကြီးတစ်ကောင်နဲ့တိုးပြီး ပြန်ထွက်လာလို့မရဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲ့သဲကန္တာရထဲမှာပဲ ကားပြိုင်ပွဲတစ်ခုလည်းကျင်းပနေပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရယ်၊ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရယ်၊ ကောင်လေးရဲ့လမ်းပြရယ်၊ ဆေးအကူသူနာပြုတစ်ယောက်ရယ်လည်း ဆီဖြည့်တဲ့စုရပ်ရုံမှာ ညအိပ်နားနေတုန်း မြွေကြီးတစ်ကောင်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီး ထွက်ပြေးကြရင်း အဲ့စက်ရုံကိုရောက်လာကြတယ်။ သတ္တုရှာခိုင်းလိုက်တဲ့ သူဌေးတို့အုပ်စုကလည်း သတ္တုအခြေအနေကြည့်ဖို့ စက်ရုံကိုရောက်အလာ အားလုံးဧရာမမြွေကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပြီး စက်ရုံဟောင်းကြီးမှာပိတ်မိသွားကြပါတယ်။ သူတို့တွေ မြွေကြီးရန်ကနေလွတ်ပြီး စက်ရုံဟောင်းကနေ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုတွေရုန်းကန်ကြိုးစားကြမလဲ၊ ဒီမြွေကြီးရဲ့ မူလရင်းမြစ်ကရောဘာလဲ ဆိုတာကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်ရှုကြရမယ့် ဇာတ်ကားလေးပါ။ ##zawgyi လူသူေဝးတဲ့သဲကႏၲာရတစ္ခုထဲမွာ စူးစမ္းရွာေဖြတဲ့အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ရွားပါးသတၱဳလိုက္ရွာရင္း စက္႐ုံေဟာင္းႀကီးတစ္ခုကို ေရာက္လာၾကပါတယ္။ အဲ့စက္႐ုံေဟာင္းႀကီးမွာပဲ သူတို႔လိုက္ရွာေနတဲ့ ရွားပါးသတၱဳကို ရွာေတြ႕သြားၾကပါတယ္။ သူတို႔လည္း သူေဌးဆီကို တည္ေနရာသတင္းပို႔ၿပီး စက္႐ုံထဲေလွ်ာက္ၾကည့္ေနတုန္း ထူးဆန္းတဲ့ဧရာမေႁမြႀကီးတစ္ေကာင္နဲ႔တိုးၿပီး ျပန္ထြက္လာလို႔မရျဖစ္သြားပါတယ္။ အဲ့သဲကႏၲာရထဲမွာပဲ ကားၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုလည္းက်င္းပေနပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရယ္၊ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ရယ္၊ ေကာင္ေလးရဲ႕လမ္းျပရယ္၊ ေဆးအကူသူနာျပဳတစ္ေယာက္ရယ္လည္း ဆီျဖည့္တဲ့စုရပ္႐ုံမွာ ညအိပ္နားေနတုန္း ေႁမြႀကီးတစ္ေကာင္တိုက္ခိုက္တာခံရၿပီး ထြက္ေျပးၾကရင္း အဲ့စက္႐ုံကိုေရာက္လာၾကတယ္။ သတၱဳရွာခိုင္းလိုက္တဲ့ သူေဌးတို႔အုပ္စုကလည္း သတၱဳအေျခအေနၾကည့္ဖို႔ စက္႐ုံကိုေရာက္အလာ အားလုံးဧရာမေႁမြႀကီးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရၿပီး စက္႐ုံေဟာင္းႀကီးမွာပိတ္မိသြားၾကပါတယ္။ သူတို႔ေတြ ...
IMDB: 6.5/10 25487 votes
Snake Fall ofaCity (2020)
Dreamcatcher (2021) ##unicode အခုတင်ဆက်မယ့်ကားလေးကတော့ 2021ထွက် Horror movie ကားလေးပါ ပရာဇ်ဆိုတဲ့ ခပ်သွက်သွက်ကောင်မလေးကပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူလေးပါ သူ့ရဲ့အသက်၂၀ပြည့်မွေးနေ့အတွက် အမဖြစ်သူအိုင်ဗီက နာမည်ကြီးပါတီလက်မှတ်ကို ဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်ပြီး အတူတူပျော်ဖို့ထွက်သွားကြပါတယ် ဒါ့ပေမယ့် ပရာဇ်တစ်ယောက် နာမည်ကြီး DJ Dreamcatcher နဲ့အဲဒီညမှာဆုံပြီး ခဏအကြာမှာပဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အမဖြစ်သူရှေ့မှာပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေသွားတယ် ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအဖြေရှာဖို့ ကြိုးစားနေတုန်းမှာပဲ မထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လာပြီး DJ Dreamcatcher နဲ့လဲဘယ်လိုတွေပတ်သက်နေလဲစောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦး နတ်ဆိုးနဲ့အလှဲအလှယ်လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် ပရိတ်သတ်ကြီးကို စိတ်ကြေနပ်မှုပေးနိုင်မယ့် Horror ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi အခုတင္ဆက္မယ့္ကားေလးကေတာ့ 2021ထြက္ Horror movie ကားေလးပါ ပရာဇ္ဆိုတဲ့ ခပ္သြက္သြက္ေကာင္မေလးကေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္တဲ့သူေလးပါ သူ႔ရဲ့အသက္၂၀ျပည့္ေမြးေန႔အတြက္ အမျဖစ္သူအိုင္ဗီက နာမည္ႀကီးပါတီလက္မွတ္ကို ေဈးႀကီးႀကီးေပး၀ယ္ၿပီး အတူတူေပ်ာ္ဖို့ထြက္သြားၾကပါတယ္ ဒါ့ေပမယ့္ ပရာဇ္တစ္ေယာက္ နာမည္ႀကီး DJ Dreamcatcher နဲ႔အဲဒီညမွာဆုံၿပီး ခဏအၾကာမွာပဲ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အမျဖစ္သူေရွ႕မွာပဲ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သတ္ေသသြားတယ္ ဒီျဖစ္စဥ္ကိုအေျဖရွာဖို့ ႀကိဳးစားေနတုန္းမွာပဲ မထင္မွတ္ထားတဲ့အရာေတြတစ္ခုၿပီးတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး DJ Dreamcatcher နဲ႔လဲဘယ္လိုေတြပတ္သက္ေနလဲေစာင့္ၾကည့္လိုက္ပါဦး နတ္ဆိုးနဲ႔အလွဲအလွယ္လုပ္တဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ႀကီးကို စိတ္ေၾကနပ္မွုေပးနိုင္မယ့္ Horror ကားေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ review – ACP File Size – 1GB Format…mp4 Quality : 720p ...
Kill Plan (2021) ##unicode Kill Plan ဇာတ်ကားမှာတော့ Nashက CIA အေးဂျင့်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Iraqက မစ်ရှင်တစ်ခုမှာ သူ့ပါတနာ Hubbardက ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ပါတနာမပျောက်ဆုံးခင်မှာ သူကIraqမစ်ရှင်ရဲ့ ထိပ်တန်းလျို့ဝှက်ချက်ဖြစ်တဲ့ XZ-9 ပရောဂျက် Codeကိုသူ့ကိုပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ XZ-9ပရောဂျက်ဟာ တရုတ်အစိုးရနဲ့ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတစ်ခုလက်တွဲ ပြီးသဘာဝလွန်ဓာတုဆေးတစ်ခုကိုစမ်းသပ်နေတဲ့ ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။Hubbardပျောက်သွားပြီးနောက်မှာ Nashတစ်ယောက် ဒီပရောဂျက်အကြောင်းစုံစမ်းရင်း ဒီပရောဂျက်ကိုဦးဆောင်နေသူက Wan ဂိုဏ်းဆိုတာသိလိုက်ရခဲ့တယ်။Wan ဂိုဏ်းကလဲ Nashဆီမှာ လျို့ဝှက်Codeရှိနေကြောင်းသိသွားသောအခါ Nashကိုချိန်းခြောက်ပြီး ဒီဆေးကိုရောင်းချနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ Agent Nashတစ်ယောက် အန္တရာယ်တွေကြားကနေ Wan ဂိုဏ်းရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဘယ်လိုတားဆီးမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Kill Plan ဇာတ္ကားမွာေတာ့ Nashက CIA ေအးဂ်င့္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ Iraqက မစ္ရွင္တစ္ခုမွာ သူ႔ပါတနာ Hubbardက ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ပါတနာမေပ်ာက္ဆုံးခင္မွာ သူကIraqမစ္ရွင္ရဲ့ ထိပ္တန္းလ်ိဳ့ဝွက္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ XZ-9 ပေရာဂ်က္ Codeကိုသူ႔ကိုေျပာျပသြားခဲ့ပါတယ္။ XZ-9ပေရာဂ်က္ဟာ တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ေဆးဝါးကုမၸဏီတစ္ခုလက္တြဲ ၿပီးသဘာဝလြန္ဓာတုေဆးတစ္ခုကိုစမ္းသပ္ေနတဲ့ ပေရာဂ်က္တစ္ခုျဖစ္တယ္။Hubbardေပ်ာက္သြားၿပီးေနာက္မွာ Nashတစ္ေယာက္ ဒီပေရာဂ်က္အေၾကာင္းစုံစမ္းရင္း ဒီပေရာဂ်က္ကိုဦးေဆာင္ေနသူက Wan ဂိုဏ္းဆိုတာသိလိုက္ရခဲ့တယ္။Wan ဂိုဏ္းကလဲ Nashဆီမွာ လ်ိဳ့ဝွက္Codeရွိေနေၾကာင္းသိသြားေသာအခါ Nashကိုခ်ိန္းေျခာက္ၿပီး ဒီေဆးကိုေရာင္းခ်နိုင္ဖို့ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ Agent Nashတစ္ေယာက္ အႏၲရာယ္ေတြၾကားကေန Wan ဂိုဏ္းရဲ့လုပ္ရက္ေတြကိုဘယ္လိုတားဆီးမလဲဆိုတာ ၾကည့္ရွုၾကပါအုံး။ review – Myet Chel File Size – ...
IMDB: 7.1/10 1,130 votes
Xico’s Journey (2021) ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ လက်ရှိ Netflix မှာအသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ စပိန်ကာတွန်းကားတစ်ကားပါ ခွေးလေးနဲ့သူ့သခင်ကောင်မလေးကိုအဓိကထားရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ ကြည့်ရတာတော်တော်လေးလည်းချစ်စရာကောင်းမယ်ထင်ပါတယ် ဇာတ်ကားထဲမှာတော့ စီးပွါးရေးသမားတစ်ချို့က သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွါးအတွက် တောင်ကြီးကိုဖြိုကြတော့မယ် တောင်မှာ အစောင့်ရှောက်တွေလည်းရှိနေပါတယ် သူ့ရဲ့အမေကလည်း အရင်ကတည်းကတောင်ထဲမှာပိတ်မိနေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့ ကိုပီဟာ အမေကိုရှာဖို့အတွက်တောင်ဆီကိုထွက်လာပါတယ် သူ့ရဲ့ခွေးလေးနဲ့ သူငယ်ချင်းကလည်းအတူတူလိုက်လာပါတယ် ထို့နောက် ခွေးလေး ဇီကိုရဲ့ မျိုးရိုးကိုလည်းသိလိုက်ရပါတယ် သူတို့ရဲ့ခရီးလမ်းဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကြည့်ရူလိုက်ကြပါတော့နော် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ လက္ရွိ Netflix မွာအသစ္ထြက္ရွိထားတဲ့ စပိန္ကာတြန္းကားတစ္ကားပါ ေခြးေလးနဲ႔သူ႔သခင္ေကာင္မေလးကိုအဓိကထား႐ိုက္ထားတဲ့ဇာတ္ကားျဖစ္လို႔ ၾကည့္ရတာေတာ္ေတာ္ေလးလည္းခ်စ္စရာေကာင္းမယ္ထင္ပါတယ္ ဇာတ္ကားထဲမွာေတာ့ စီးပြါးေရးသမားတစ္ခ်ိဳ႕က သူတို႔ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ေတာင္ႀကီးကိုၿဖိဳၾကေတာ့မယ္ ေတာင္မွာ အေစာင့္ေရွာက္ေတြလည္းရွိေနပါတယ္ သူ႔ရဲ႕အေမကလည္း အရင္ကတည္းကေတာင္ထဲမွာပိတ္မိေနတယ္ဆိုတာ သိလိုက္ရတဲ့ ကိုပီဟာ အေမကိုရွာဖို႔အတြက္ေတာင္ဆီကိုထြက္လာပါတယ္ သူ႔ရဲ႕ေခြးေလးနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းကလည္းအတူတူလိုက္လာပါတယ္ ထို႔ေနာက္ ေခြးေလး ဇီကိုရဲ႕ မ်ိဳး႐ိုးကိုလည္းသိလိုက္ရပါတယ္ သူတို႔ရဲ႕ခရီးလမ္းဘယ္လိုေတြဆက္ျဖစ္မယ္ဆိုတာ ၾကည့္႐ူလိုက္ၾကပါေတာ့ေနာ္ review – Hmue File Size – 1GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL Genre : Animation Subtitle : Myanmar Subtitle (hardsub) Translated by Hmue Encoded by Arrow
Black Beach (2021) ##unicode Black Bleach ဇာတ်ကားမှာတော့ ရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Carlosကို သူ့အထက်ကနေ Africaကိုသွားဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ် ။နေ့စေလစေ့ ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမကို မထားခဲ့ချင်တာကြောင့် Carlosက ငြင်းပယ်ခဲ့ပေမဲ့ New Yorkကိုရာထူးတိုးပြီး ပြောင်းခွင့်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးတာမို့ Carlosက အာဖရိကကိုသွားဖို့လက်ခဲ့တယ်။ Arficaက အမှုကတော့ ရေနံစက်ရုံကအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးကို ပြန်ပေးဆွဲသွားတဲ့အမှုပါ။ ပြန်ပေးဆွဲသွားသူက Carlosရဲ့ အရင်က သူငယ်ချင်း Carlixto ဖြစ်နေခဲ့တယ်။Carlosတစ်ယောက် ဓားစာခံကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့အတွက် ပြန်ပေးသမားနဲ့ဆွေးနွေးပေးဖို့ အာဖရိကကို သွားခဲ့ပေမဲ့ ဟိုကိုရောက်သွားသောအခါမှာ သူတို့ထင်ထားသလို ပြန်ပေးဆွဲတဲအမှုမျိုး မဟုတ်တဲ့အခါမှာ Carlosတစ်ယောက်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလား။ ဒီနိုင်ငံကရော သူဘေးကင်းကင်းနဲ့ ပြန်ထွက်လာနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Black Bleach ဇာတ္ကားမွာေတာ့ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Carlosကို သူ႔အထက္ကေန Africaကိုသြားဖို့ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္ ။ေန႔ေစလေစ့ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမကို မထားခဲ့ခ်င္တာေၾကာင့္ Carlosက ျငင္းပယ္ခဲ့ေပမဲ့ New Yorkကိုရာထူးတိုးၿပီး ေျပာင္းခြင့္ေပးမယ္လို့ ကတိေပးတာမို့ Carlosက အာဖရိကကိုသြားဖို့လက္ခဲ့တယ္။ Arficaက အမွုကေတာ့ ေရနံစက္႐ုံကအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးကို ျပန္ေပးဆြဲသြားတဲ့အမွုပါ။ ျပန္ေပးဆြဲသြားသူက Carlosရဲ့ အရင္က သူငယ္ခ်င္း ...
IMDB: 5.5/10 625 votes
Haymaker (2021) ##unicode နစ်ခ်က အရင်က အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကြိုးဝိုင်းဖိုက်တာတစ်ယောက်။ လက်ရှိမှာတော့ သူ့ဘဝကြီးက အဓိပ္ပာယ်မဲ့နေသလို ယောင်ခြောက်ဆယ်ဖြစ်နေရတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ဘားတစ်ခုမှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူ့ကိုသက်တော်စောင့်အဖြစ် ငှားခဲ့တယ်။ အဲ့အမျိုးသမီးက နိုမီဆိုတဲ့ တက်သစ်စအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အနယ်နယ်၊ အရပ်ရပ်မှာ ရှိုးပွဲတွေပတ်ဆိုရတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ နစ်ခ်တစ်ယောက် သဘောတူလိုက်ပြီး နိုမီနဲ့အတူတူ ခရီးတွေသွားရင်း အပြင်လောကကြီးကို တစ်ဖန်ပြန်ထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့သူကြိုးဝိုင်းထဲကို ပြန်ဝင်ရဖို့ အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါမှာတော့ နစ်ခ်တစ်ယောက် အရင်လိုဖိုက်တာကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြိုးဝိုင်းထဲမှာအစွမ်းပြနိုင်ဦးမလား။ သူနဲ့နိုမီရဲ့ဇာတ်လမ်းကရော ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲ ဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ ခံစားကြည့်ရှုကြပါဦး။ ##zawgyi နစ္ခ္က အရင္က ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ႀကိဳးဝိုင္းဖိုက္တာတစ္ေယာက္။ လက္ရွိမွာေတာ့ သူ႔ဘဝႀကီးက အဓိပၸာယ္မဲ့ေနသလို ေယာင္ေျခာက္ဆယ္ျဖစ္ေနရတယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ဘားတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က သူ႔ကိုသက္ေတာ္ေစာင့္အျဖစ္ ငွားခဲ့တယ္။ အဲ့အမ်ိဳးသမီးက ႏိုမီဆိုတဲ့ တက္သစ္စအဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အနယ္နယ္၊ အရပ္ရပ္မွာ ရႈိးပြဲေတြပတ္ဆိုရတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ နစ္ခ္တစ္ေယာက္ သေဘာတူလိုက္ၿပီး ႏိုမီနဲ႔အတူတူ ခရီးေတြသြားရင္း အျပင္ေလာကႀကီးကို တစ္ဖန္ျပန္ထိေတြ႕ခြင့္ရခဲ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔သူႀကိဳးဝိုင္းထဲကို ျပန္ဝင္ရဖို႔ အေၾကာင္းဖန္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ နစ္ခ္တစ္ေယာက္ အရင္လိုဖိုက္တာေကာင္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ႀကိဳးဝိုင္းထဲမွာအစြမ္းျပႏိုင္ဦးမလား။ သူနဲ႔ႏိုမီရဲ႕ဇာတ္လမ္းကေရာ ဘယ္လိုျဖစ္သြားမွာလဲ ဆိုတာကို ဇာတ္လမ္းေလးထဲမွာ ခံစားၾကည့္ရႈၾကပါဦး။ Review – ...
Duckweed (2017) ##unicode ဒီတစ်ခါ comedy-drama ဇာတ်ကားအမျိုးအစားလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် တကယ်ရယ်ရမဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါနော် ရုံကြီးကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲမှာလည်း ဇကာတင်ဝင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ လတ်တလောမှာလဲ ထိုင်းကနေပြန် remark ရိုက်ထားတဲ့ My God! Father (2020)ရဲ့မူရင်းဇာတ်ကားလေးပါ နောက်ခံတီးလုံးကလည်းကောင်း သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း Eddie Peng (Operation Mekong) , Deng Chao (The Mermaid 2016), Zanilia Zhao (လတ်တလောပြိးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ Legend of fei) တို့တွေဆိုတော့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင် လန်က ကားမောင်းချန်ပီယံတစ်ယောက်ပါ တစ်နေ့သူ့အဖေနဲ့ ကားအတူတူမောင်းနေရင်း မတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် အဲဒီအချိန်မှာ သူက အချိန်နောက်ပြန် ခရီးသွားပြီး သူ့အဖေရဲ့ငယ်ဘဝကိုရောက်သွားပါတော့တယ် လန်က အစက သူအဖေနဲ့အဆင်မပြေပါဘူး ဒါပေမယ့် သူ့အဖေငယ်ဘဝကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါ သားအဖ နှစ်ယောက်က သူငယ်ချင်းဖြစ်လာပါတော့တယ် သားအဖနှစ်ယောက်ကြားကသံယောဇဉ်တွေအကြောင်းကို ကြည့်ရမယ့် dramaကားကောင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်လို့ ညွှန်းပေးလိုက်ရပါတယ် ##zawgyi ဒီတစ္ခါ comedy-drama ဇာတ္ကားအမ်ိဳးအစားေလးကိုတင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ တကယ္ရယ္ရမဲ့ဇာတ္ကားေကာင္းေလးပါေနာ္ ႐ုံႀကီးကားတစ္ကားျဖစ္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္႐ုပ္ရွင္ဆုေပးပြဲမွာလည္း ဇကာတင္ဝင္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားေကာင္းေလးပါ လတ္တေလာမွာလဲ ထိုင္းကေနျပန္ remark ရိုက္ထားတဲ့ My God! ...
IMDB: 6.4/10 1,215 votes
SIU (Special Investigation Unit) (2011) ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ ၂၀၁၁ခုနှစ်တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့စုံထောက်ကားကောင်းလေးပါ ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါဝင်တဲ့မင်းသားကလည်း ဒီဇာတ်ကားအတွက်သရုပ်ဆောင်ဆုဇကာတင်ဝင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ ရဲတစ်ယောက်အသတ်ခံရတဲ့အမှုကိုစုံစမ်းဖို့အတွက် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့လိုက်ပါတယ် စုံထောက်ကင်ကတော့ ဒီအဖွဲ့မှာ အတော်ဆုံးစုံထောက်တစ်ယောက်ပါ အဖွဲ့ထဲကို FBI က မှုခင်းပရော်ဖက်ဆာကင်လည်း ပါဝင်လာပါတယ် မှုခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာ မှုးယစ်ဆေးဝါးတွေလည်းတွေ့ရတဲ့အတွက် အမှုကပိုပိုပြီးတော့ရူပ်လာပါတယ် အဲဒီနောက်မှာတော့ ရဲတွေကလည်းဒီအမှုမှာလာဘ်စားပြီးပါဝင်တာကိုသိခဲ့ရပါတယ် ဘယ်လိုလာဘ်စားမှုတွေကို တွေ့ကြရမှာလဲစုံထောက်ကင်နဲ့ ပရော်ဖက်ဆာကင်တို့ အတူတွဲပြီးတော့ ဘယ်လိုအမှုကိုစုံစမ်းကြမလဲဆိုတာ ကြည့်ရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ ၂၀၁၁ခုနှစ်ကပုံစံတွေကိုလည်းပြန်ကြည့်ရင်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာအမှုတွေကိုလည်းကြည့်ရမဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်လို့ ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားအဖြစ်ညွှန်းပေးလိုက်ရပါတယ်နော် ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တုန္းက ထြက္ရွိခဲ့တဲ့စုံေထာက္ကားေကာင္းေလးပါ ဇာတ္လမ္းထဲမွာပါ၀င္တဲ့မင္းသားကလည္း ဒီဇာတ္ကားအတြက္သ႐ုပ္ေဆာင္ဆုဇကာတင္၀င္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားေကာင္းေလးတစ္ကားပါ ဒီဇာတ္လမ္းထဲမွာေတာ့ ရဲတစ္ေယာက္အသတ္ခံရတဲ့အမႈကိုစုံစမ္းဖို႔အတြက္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕လိုက္ပါတယ္ စုံေထာက္ကင္ကေတာ့ ဒီအဖြဲ႕မွာ အေတာ္ဆုံးစုံေထာက္တစ္ေယာက္ပါ အဖြဲ႕ထဲကို FBI က မႈခင္းပေရာ္ဖက္ဆာကင္လည္း ပါ၀င္လာပါတယ္ မႈခင္းျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာမွာ မႈးယစ္ေဆး၀ါးေတြလည္းေတြ႕ရတဲ့အတြက္ အမႈကပိုပိုၿပီးေတာ့႐ူပ္လာပါတယ္ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ရဲေတြကလည္းဒီအမႈမွာလာဘ္စားၿပီးပါ၀င္တာကိုသိခဲ့ရပါတယ္ ဘယ္လိုလာဘ္စားမႈေတြကို ေတြ႕ၾကရမွာလဲစုံေထာက္ကင္နဲ႔ ပေရာ္ဖက္ဆာကင္တို႔ အတူတြဲၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုအမႈကိုစုံစမ္းၾကမလဲဆိုတာ ၾကည့္ရမယ့္ဇာတ္ကားေကာင္းေလးပါ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ကပုံစံေတြကိုလည္းျပန္ၾကည့္ရင္း စိတ္လႈပ္ရွားစရာအမႈေတြကိုလည္းၾကည့္ရမဲ့ဇာတ္ကားေလးျဖစ္လို႔ ၾကည့္သင့္တဲ့ဇာတ္ကားေကာင္းေလးတစ္ကားအျဖစ္ၫႊန္းေပးလိုက္ရပါတယ္ေနာ္ Review – Hmue File Size – 1.6GB Format…mp4 Quality : 720p FHD Genre :Crime, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (softsub) Translated by Hmue Encoded by Arrow
IMDB: 5.9/10 186 votes
SIU (Special Investigation Unit) (2011)
Run Hide Fight (2021) ##unicode ဇိုဝီဟောဟာမကြာသေးခင်ကမှသူ့အမေသေဆုံးသွားတဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးနေပြီး သူ့အဖေအပါအဝင်အားလုံးနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေပါတယ် သူ့မှာအခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ် သူကတော့လူးဝစ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးပါ ဇိုဝီဟာကျောင်းပြီးမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေတာဖြစ်ပြီး နေရာသစ်ကိုမြန်မြန်ပြောင်းချင်နေတာပါ အထက်တန်းကျောင်းကကိစ္စအားလုံးဟာ အရေးမပါဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဇိုဝီအတွက် တစ်နေ့မှာတော့ တစ်သက်မမေ့နိုင်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် အဲ့တာကတော့ဇိုဝီတို့ရဲ့ဗာနွန်အထက်တန်းကျောင်းကိုသေနတ်သမားတွေကဝင်စီးတာပါ ဇိုဝီတစ်ယောက်မထင်မှတ်ဘဲဖြစ်လာတဲ့သတ်ဖြတ်မှုတွေကြားမှာသူအပါအဝင် သူ့သူငယ်ချင်းအားလုံးဘေးကင်းအောင်ကြံစည်ပါတော့တယ် ဇိုဝီတစ်ယောက်နောက်ဆုံးမှာသူငယ်ချင်းအားလုံးကိုဘေးကင်းကင်းကယ်ထုတ်သွားနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို တစ်ကားလုံးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ဇိုဝီေဟာဟာမၾကာေသးခင္ကမွသူ႔အေမေသဆုံးသြားတဲ့အတြက္ စိတ္ဖိစီးေနၿပီး သူ႔အေဖအပါအဝင္အားလုံးနဲ႔အဆင္မေျပျဖစ္ေနပါတယ္ သူ႔မွာအခင္ဆုံးသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ပဲရွိပါတယ္ သူကေတာ့လူးဝစ္ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးပါ ဇိုဝီဟာေက်ာင္းၿပီးမယ့္အခ်ိန္ကိုေစာင့္ေနတာျဖစ္ျပီး ေနရာသစ္ကိုျမန္ျမန္ေျပာင္းခ်င္ေနတာပါ အထက္တန္းေက်ာင္းကကိစၥအားလုံးဟာ အေရးမပါဘူးလို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဇိုဝီအတြက္ တစ္ေန႔မွာေတာ့ တစ္သက္မေမ့ႏိုင္စရာကိစၥတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ အဲ့တာကေတာ့ဇိုဝီတို႔ရဲ႕ဗာႏြန္အထက္တန္းေက်ာင္းကိုေသနတ္သမားေတြကဝင္စီးတာပါ ဇိုဝီတစ္ေယာက္မထင္မွတ္ဘဲျဖစ္လာတဲ့သတ္ျဖတ္မႈေတြၾကားမွာသူအပါအဝင္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းအားလုံးေဘးကင္းေအာင္ႀကံစည္ပါေတာ့တယ္ ဇိုဝီတစ္ေယာက္ေနာက္ဆုံးမွာသူငယ္ခ်င္းအားလုံးကိုေဘးကင္းကင္းကယ္ထုတ္သြားႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကို တစ္ကားလုံးစိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမယ့္ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL Genre :Action Subtitle : Myanmar Subtitle (Soft sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
Magikland (2020) ##unicode ဒီကားထဲမှာတော့ မက်ဂျစ်လန့်ဆိုတဲ့ဂိမ်းဆို လူတိုင်းကနှစ်သက်ပြီးဆော့ကစားကြပါတယ် ထို့နောက်မက်ဂျစ်လန့်ကိုကယ်တင်ပါဆိုပြီး ခရစ်မတ်အထူးစိန်ခေါ်မူလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ ဘွိုင်း ပတ်ဒ် ညီအစ်မနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မာယာနဲ့ကစ် သူတို့လေးယောက်က အတော်ဆုံးကစားသမားတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ ဂိမ်းထဲကိုတကယ်ရောက်သွားပါတော့တယ် ဂိမ်းထဲမှာကလည်း တကယ်မက်ဂျစ်လန့်က အန္တရာယ်ကျရောက်နေပြီး သူတို့လေးယောက်က ကယ်တင်ရမဲ့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်နေပါတော့တယ် ဂိမ်းထဲမှာ သူတို့ရဲ့ပဟေဠိတွေကိုဖြေရှင်းရင်း လက်နက်တွေကိုရှာဖွေရမှာပါ လက်ရှိကမ္ဘာကြီးကနေ ဂိမ်းကမ္ဘာထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုတွေထူးထူးခြားခြားဖြစ်မလဲ ဘာမစ်ရှင်တွေသူတို့လုပ်ရမလဲဆိုတာကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ဒီကားထဲမွာေတာ့ မက္ဂ်စ္လန္႔ဆိုတဲ့ဂိမ္းဆို လူတိုင္းကႏွစ္သက္ၿပီးေဆာ့ကစားၾကပါတယ္ ထို႔ေနာက္မက္ဂ်စ္လန္႔ကိုကယ္တင္ပါဆိုၿပီး ခရစ္မတ္အထူးစိန္ေခၚမူလုပ္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဘြိဳင္း ပတ္ဒ္ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ မာယာနဲ႔ကစ္ သူတို႔ေလးေယာက္က အေတာ္ဆုံးကစားသမားေတြျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ ဂိမ္းထဲကိုတကယ္ေရာက္သြားပါေတာ့တယ္ ဂိမ္းထဲမွာကလည္း တကယ္မက္ဂ်စ္လန္႔က အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနၿပီး သူတို႔ေလးေယာက္က ကယ္တင္ရမဲ့သူရဲေကာင္းေတြျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္ ဂိမ္းထဲမွာ သူတို႔ရဲ႕ပေဟဠိေတြကိုေျဖရွင္းရင္း လက္နက္ေတြကိုရွာေဖြရမွာပါ လက္ရွိကမာၻႀကီးကေန ဂိမ္းကမာၻထဲကိုေရာက္သြားတဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုေတြထူးထူးျခားျခားျဖစ္မလဲ ဘာမစ္ရွင္ေတြသူတို႔လုပ္ရမလဲဆိုတာကို စိတ္လႈပ္ရွားစြာနဲ႔ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ဇာတ္ကားပဲျဖစ္ပါတယ္ Review – Hmue File Size – 1.2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL Genre :Action, Adventure, Fantasy Subtitle : Myanmar Subtitle (Soft sub) Translated by Hmue Encoded by Arrow
IMDB: 6.1/10 2375 votes
Criminal Police (2021) [စာအရှင်ဖြစ်သည့်အတွက် MX Player , VLC Player တို့နှင့် စာဖော်၍ကြည့်ပါရန် ] ##unicode ဒီတရုတ်ရဲကားလေးရဲ့ဇာတ်လမ်ူအကျဉ်းကတော့ တင်းဝေဟာ တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ။ ချစ်ရတဲ့ဇနီးချောလေးနဲ့ ဘဝကိုပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွားယဖြတ်သန်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံတရားကမျက်နှာသာမပေးတဲ့အခါ သူ့မိန်းမပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရပြီး အသတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ ဘာသဲလွန်စမှမကျန်တဲ့အတွက် ပြန်ပေးဆွဲလူသတ်သွားတဲ့ တရားခံကိုလည်း မဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲ့လိုနဲ့ တစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ လူသတ်မှုတစ်ခုရဲ့ တရားခံက သူ့မိန်းမကိုပြန်ပေးဆွဲသွားတဲ့သူနဲ့ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ တင်းဝေတစ်ယောက် အဲ့တရားခံကိုကြိုးစားပြီး စုံးစမ်းပါတော့တယ်။ အပုန်းကောင်းတဲ့တရားခံကို တင်းဝေတို့ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးနိုင်ပါ့မလား။ အဲ့တရားခံကရော တင်းဝေမိန်းမကို ဘာလို့ပြန်ပေးဆွဲပြီးသတ်ပစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာတွေကို ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင် တင်ဆက်ပေးထားလို့ ကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါဦး။ ##zawgyi ဒီတ႐ုတ္ရဲကားေလးရဲ႕ဇာတ္လမ္ူအက်ဥ္းကေတာ့ တင္းေဝဟာ တာဝန္ေက်ပြန္တဲ့ရဲဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ပါ။ ခ်စ္ရတဲ့ဇနီးေခ်ာေလးနဲ႔ ဘဝကိုေပ်ာ္႐ႊင္ေအးခ်မ္းစြားယျဖတ္သန္းေနသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကံတရားကမ်က္ႏွာသာမေပးတဲ့အခါ သူ႔မိန္းမျပန္ေပးဆြဲခံလိုက္ရၿပီး အသတ္ခံလိုက္ရပါတယ္။ ဘာသဲလြန္စမွမက်န္တဲ့အတြက္ ျပန္ေပးဆြဲလူသတ္သြားတဲ့ တရားခံကိုလည္း မဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အဲ့လိုနဲ႔ တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ လူသတ္မႈတစ္ခုရဲ႕ တရားခံက သူ႔မိန္းမကိုျပန္ေပးဆြဲသြားတဲ့သူနဲ႔ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိလာတဲ့အခါမွာေတာ့ တင္းေဝတစ္ေယာက္ အဲ့တရားခံကိုႀကိဳးစားၿပီး စုံးစမ္းပါေတာ့တယ္။ အပုန္းေကာင္းတဲ့တရားခံကို တင္းေဝတို႔ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးႏိုင္ပါ့မလား။ အဲ့တရားခံကေရာ တင္းေဝမိန္းမကို ဘာလို႔ျပန္ေပးဆြဲၿပီးသတ္ပစ္ခဲ့တာလဲဆိုတာေတြကို ဇာတ္လမ္းေလးထဲမွာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းေအာင္ တင္ဆက္ေပးထားလို႔ ၾကည့္ရႈခံစားေပးၾကပါဦး။ Review – Yue Liang File Size – ...
IMDB: 6.8/10 2564 votes
More Than Family (2020) ##unicode ယခုတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်ကားလေးကတော့ မင်းသမီးချောKrystalပါဝင်ထားတဲ့ မိသားစုဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်ဆောင်မင်းသမီးကင်တိုအင်ဟာအထက်တန်းကျောင်းသားလေးနဲ့ချစ်ကြိုက်ပြီးကိုယ်ဝန်ရသွားပါတော့တယ် အဲ့ဒီမှာသူမရဲ့မိဘတွေကဆူပါတော့တယ် သူမရဲ့အမေဟာနောက်အိမ်ထောင်ပြုထားတာပါ သူမလက်ထပ်ရင်လည်း သူမရဲ့အဖေနဲ့အမေလိုအိမ်ထောင်ပြိုလဲမှာကိုတိုအင်ကကြောက်နေပါတယ် အဲ့နောက်မှာတော့ အဖေအရင်းကိုရှာမယ်ဆိုပြီး ဒယ်ဂူမြို့ကိုထွက်လာပါတော့တယ် တိုအင်ကတကယ်သူမရဲ့အဖေ့ရင်းကိုရှာတွေ့နိုင်မှာလား သူမရဲ့ပထွေးကသူမအပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာကိုရောသိလာနိုင်မှာလား သူမရဲ့လက်ထပ်ပွဲကရောဘယ်လိုဖြစ်လာမှာလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စိတ်ကြည်နူးဖွယ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရူမယ့်မိသားစုဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ယခုတင္ဆက္ေပးခ်င္တဲ့ဇာတ္ကားေလးကေတာ့ မင္းသမီးေခ်ာKrystalပါဝင္ထားတဲ့ မိသားစုဇာတ္ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္ေဆာင္မင္းသမီးကင္တိုအင္ဟာအထက္တန္းေက်ာင္းသားေလးနဲ႔ခ်စ္ႀကိဳက္ၿပီးကိုယ္ဝန္ရသြားပါေတာ့တယ္ အဲ့ဒီမွာသူမရဲ႕မိဘေတြကဆူပါေတာ့တယ္ သူမရဲ႕အေမဟာေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳထားတာပါ သူမလက္ထပ္ရင္လည္း သူမရဲ႕အေဖနဲ႔အေမလိုအိမ္ေထာင္ၿပိဳလဲမွာကိုတိုအင္ကေၾကာက္ေနပါတယ္ အဲ့ေနာက္မွာေတာ့ အေဖအရင္းကိုရွာမယ္ဆိုၿပီး ဒယ္ဂူၿမိဳ႕ကိုထြက္လာပါေတာ့တယ္ တိုအင္ကတကယ္သူမရဲ႕အေဖ့ရင္းကိုရွာေတြ႕ႏိုင္မွာလား သူမရဲ႕ပေထြးကသူမအေပၚထားတဲ့ေမတၱာကိုေရာသိလာႏိုင္မွာလား သူမရဲ႕လက္ထပ္ပြဲကေရာဘယ္လိုျဖစ္လာမွာလဲဆိုတာ ရင္ခုန္စိတ္ၾကည္ႏူးဖြယ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္႐ူမယ့္မိသားစုဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားပဲျဖစ္ပါတယ္ Review – Hmue File Size – 1.2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL Genre : Comedy, Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue Encoded by Arrow
IMDB: 6.8/10 52346 votes